Donald Trump oo si been abuur ah loogu magacaabay Abaalmarinta nabadda ee Nobel-ka & Dacwad lagu soo oogay | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Gddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda Baydhaba & Xariga Mukhtaar…
Donald Trump oo si been abuur ah loogu magacaabay Abaalmarinta nabadda ee Nobel-ka & Dacwad lagu soo oogay
Guddiga caalamiga ah ee bixiya abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobel-ka loo yaqaano ayaa gal dacwadeed ka furtay booliiska dalka Norway kadib markii ay soo baxday in si turuufo ah ama been abuur ah madaxweynaha Maraykanka loogu magacaabay in uu helo abaalmarinta Nobel-ka.
“Waxaan aaminsanahay in magacaabista Trump ay tahay mid been abuur ah” ayuu yiri agaasimaha mac-hadka Nobel , Olav Njølstad.
Dadka soo jeedin kara qofka la siinayo abaalmarinta Nobel-ka ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanada, wasiirada, bareyaasha jaamacadaha, iyo waliba dadkii horay abaalmarintan u qaatay, waxayna tahay in soojeedinta ama magacaabista lasoo gudbiyo kama dambeys 31-da bisha Janaayo sanad kasta, waxaana qofka guulaystay lasoo xushaa bisha Oktoobar.
Lama oga qofka soo jeediyay magaca Trump, balse waa qof ku sugan Maraykanka.
Waxaa la sheegay in qof iska dhigaya in uu yahay qofkii xaqa u lahaa in uu soojeedin sameeyo, markii qofkii saxda ahaa la wacayna waxa uu sheegay in uusan isaga soo gudbinin wax magacaabis ah.
Sanadkii 2009-kii markii abaalmarintan la siiyay madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama ayaa aad loo dhaleeceeyay guddiga, waxaana la sheegay in Obama uusan xiligaas u qalmin in la siiyo abaalmarin nabadeed xili ciidammada Maraykanka ay dagaal kaga jireen dalal badan.
Illaa afar madaxweyne oo soo maray Maraykanka ayaa illaa hadda qaatay abaalmarintan.
Sida uu qoray wargeyska New York Times, 329 musharax oo isugu jira 217 shaqsi iyo 112 hay’adood ayaa sanadkani u tartamaya abaalmarintan, dhammaantoodna waa sir aad u saraysa in la ogaado kuwa ay yihiin.
Waxa uu wargeyska sheegay oo kale in qofka been abuuray magacaabista Trump uu sidoo kale falkan sameeyay sanadkii hore, kiiskana hadda gacanta loo galiyay hay’adda FBI-da Maraykanka oo qeyb ahaan baaraysa.
Previous articleAlshabaab oo War cad kasoo saartay Qarixii is-miidaaminta ahaa ee ka dhacay Barta Siinka Dheer
Next articleXOG: Itoobiya oo si rasmi ah ugu biirtay Heshiiska DP World kula wareegtay Dekadda Berbera [Akhriso Heshiis cusub]
Gddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda Baydhaba & Xariga Mukhtaar Roobow
BREAKING NEWS December 13, 2018
Qormooyinka December 13, 2018